Ekosy malaza manana ny sasany amin'ireo tsara indrindra endriky ary hanofana lalana hevitra eto amin'izao tontolo izao. izany lalamby dia Manome fomba fijery ny lavitra betsaka hivadika, lochs, ary ny tendrombohitra. Rehefa manao dia lavitra amin'ny West Highland-dalana,, ianao ho tsara vintana ampy traikefa ny malaza Glenfiddich Viaduct. Jereo mahazatra? Izany no nasongadina satria ho toy ny Hogwarts Express ao amin'ny Harry Potter sarimihetsika franchise. Alao an-tsaina ny paompy indroa ho azon'ireo fomba fijery ireo.
Raha tianao ny miadana fiaran-dalamby lalana haingana hevitra, izao no lalana ho anao sy ny Instagram mpanara-. Ny fomba fijery Panoramika manjelatra dia hanomboka amin'ny fahitana ny malaza Matterhorn. avy Zermatt, ianao hahatonga ny fito-ora lalamby dia teny an- UNESCO World Heritage Site-dalana ho any St Moritz. Mitady handrapaka mankafy sary ho toy ny be voninahitra Alpine mandalo ny varavarankelyo ny fomba fijery.
Ny safidy fanakatonana anay raha hijery ny zotram-by – Inlandsbanan, Soeda
Raha ny Glacier Express tsy ampy ny oram-panala sy ny ranomandry ho anao, Avy eo ianao tia ny afovoan-dalana,. 14-ora io traikefa nahafinaritra lamasinina dia manomboka ao Kristinehamn alohan'ny fanaovana ny lalana amin'ny alalan'ny untamed skandinavianina lalana mankany Gallivare. Avy amin'ny varavarankely, ianao mahita ny Faribolan-tendrontany Avaratra sy – raha mitandrina ny masonao peeled – bibidia sasany amin'ny endrika reindeer, moose, ary ny Elk.
Ka izao rehefa avy nahalala momba ny fomba fijerin'ny zotram-piaran-dalamby ianao ary vonona ny handeha amin'ny lalàm-by miovaova eo am-pofoanao ny kaontinao Instagram ary mahazo mpanaraka vaovao anao? Boky ny nofy nandeha fiaran-dalamby ankehitriny amin'ny Save A Train. Ary azonao atao koa ny manamarina ny kaonty Instagram anay instagram.com/saveatrain
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-route-views-to-make-your-instagram-account-shine%3Flang%3Dmg/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#EKOSY Instagram Soeda Train Travel Travel travelnorway travelswitzerland